“Handichafariri Zvekurwa”—Kusiya Upenyu Hwekurwisana Nevanhu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Basque Belize Kriol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Gujarati Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Ibanag Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kannada Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Maya Mingrelian Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Turkish Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Yakataurwa naMICHAEL KUENZLE
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa “Handichafariri Zvekurwa”
Gore Rekuberekwa: 1956
Nhoroondo yeupenyu: Ndaishaya chinangwa muupenyu, ndaiita unzenza, uye ndaifarira kurwisana nevanhu
Ndakaberekerwa muguta reCalgary muAlberta, kuCanada. Pandakanga ndichiri kacheche, vabereki vangu vakarambana uye ini naamai vangu takanogara nanasekuru vabereki vaamai. Vana sekuru vangu nambuya vaitida tese naamai vangu uye ndakakura ndiri mwana aifara. Ndinofara chaizvo kana ndikafunga makore iwayo eudiki pandaiva ndisina kana chekutya.
Pandakanga ndava nemakore 7, upenyu hwangu hwakachinja amai pavakadzokerana nababa tikabva tatamira kuSt. Louis, Missouri, kuUnited States. Baba vangu vaindiitira utsinye chaizvo. Semuenzaniso, musi wekutanga kudzoka kumba ndichibva kuchikoro chitsva chandakanga ndava kupinda, baba vangu vakaziva kuti ndakanga ndarohwa nevamwe vana kuchikoro. Vakaita kufuta nehasha vachibva vandirova kupfuura zvandakanga ndaitwa kuchikoro. Vakati ndaifanirawo kudzorera uye ndizvo zvakazoita kuti nditange zvezvibhakera ndiine makore 7.
Hasha dzababa dzaiita kuti amai vashatirwe zvekuti mumba maigara muine bopoto. Ndakatanga kushandisa madhiragi nedoro ndiine makore 11. Ndakaramba ndichiwedzera kuva munhu ane hasha uye ndaigara ndichirwa nevanhu mumaraini. Pandakazopedza sekondari, tsika yangu yekurwisana nevanhu yakanga yandichinja kuva mumwe munhu.
Pandakanga ndava nemakore 18, ndakajoina mauto eU.S. Marine Corps. Zvandakadzidziswa ikoko zvakaita kuti hasha dzandaiva nadzo dziite kuti ndive mhondi chaiyo. Pashure pemakore 5, ndakasiya chiuto kuti ndinodzidza psychology ndichida kuzoshanda neveFederal Bureau of Investigation. Ndakatanga kudzidza payunivhesiti muUnited States ndikazoenderera mberi ndava kuCanada pandakadzokera ikoko.
Ndava kuyunivhesiti ndakatanga kunetseka nezvinoitwa nevanhu uye zvinoitika muupenyu. Vanhu vanongozvifunga, hapana chine musoro chaiitika munyika, uye matambudziko evanhu aiita sekuti haaperi. Ndakanga ndisisina tariro yekuti vanhu vanogona kuita kuti nyika ive nani.
Ndichiona sekuti upenyu hauna chahunobatsira, upenyu hwangu hwakawira mumatope ndava kungoita zvekudhakwa, zvemadhiragi, uye kukara mari nebonde. Ndaigara ndiri mumapati uye ndaichinjanisa vasikana. Zvandakadzidza kuchiuto zvakandipa ushingi hwekungogara ndichirwisana nevanhu vandaifunga kuti vaibata vamwe zvisina kunaka. Asi ndakanga ndatova muranda, ndichingofunga zvekurwisa vamwe.
Mumwe musi, ini neshamwari yangu takanga takadhakwa tiri pamba pangu tichigadzira mbanje yataida kunotengesa, shamwari yangu yakandibvunza kana ndaitenda kuti Mwari ariko. Ndakapindura kuti, “Kana Mwari ari iye ari kukonzera kutambura kuri munyika, handidi kana kunzwa nezvake!” Musi wakatevera, musi wekutanga ndiri pabasa rangu idzva, wandaishanda naye uyo akanga ari mumwe weZvapupu zvaJehovha akandibvunza kuti, “Unofunga kuti Mwari ndiye ari kukonzera matambudziko ari munyika here?” Ndakashamisika sezvo waiva mubvunzo watanga tataura nezvawo nezuro wacho zvekuti ndakabva ndada kuziva zvakawanda. Kwemwedzi 6 yakatevera, takakurukura kakawanda, uye akandiratidza mhinduro dzemuBhaibheri dzemimwe mibvunzo yakaoma chaizvo yandaiva nayo muupenyu.
Musikana wandaida kuroora, uye wandaitogara naye, aisada kunzwa nezvezvinhu zvandakanga ndiri kudzidza. Rimwe zuva uri musi weSvondo, ndakamuudza kuti ndakanga ndaudza Zvapupu kuti zvizouya kumba kuti zvidzidze nesu Bhaibheri. Mangwana acho pandakadzoka ndichibva kubasa ndakasvika mumba musina kana chinhu, akanga atuta zvinhu zvese aenda. Ndakaenda panze ndikachema. Ndakanyengeterawo kuna Mwari ndichikumbira kuti andibatsire. Ndiko kaiva kekutanga kushandisa zita raMwari rekuti Jehovha ndichinyengetera.—Pisarema 83:18.
Papera mazuva maviri, ndakabva ndatanga kudzidza Bhaibheri nemumwe murume nemudzimai wake, avo vaiva Zvapupu. Vaenda, ndakasara ndichiverenga bhuku ratainge tadzidza raIwe Unogona Kurarama Nokusingaperi muParadhiso Pasi Pano, ndikabva ndaripedza usiku ihwohwo. * Zvandakadzidza nezvaJehovha Mwari neMwanakomana wake Jesu Kristu zvakandibaya mwoyo. Ndakaona kuti Jehovha ane tsitsi uye anorwadziwa patinotambura. (Isaya 63:9) Ndakanyanya kubatwa-batwa nekudiwa kwandinoitwa naMwari uye kuzvipira kwakaita Mwanakomana wake kuti ndibatsirwe. (1 Johani 4:10) Zvakaita kuti ndione kuti Jehovha akandiitira mwoyo murefu “nekuti hapana waanoda kuti aparadzwe asi anoda kuti vanhu vese vasvike pakutendeuka.” (2 Petro 3:9) Ndakaona kuti Jehovha akanga achida kuti ndiuye kwaari.—Johani 6:44.
Ndakabva ndatotanga kupinda misangano vhiki iroro. Ndakanga ndiine bvudzi refu, ndiine mhete uye ndaitotyisa, asi Zvapupu zvakandibata sehama yavo chaiyo yavakanga vava nenguva vasati vaona. Vakaratidza kuti vaiva vaKristu vechokwadi. Ndakanzwa semakore aya pandaiva kumba nasekuru nambuya, asi ndichitova panzvimbo yakatonyanya kunaka.
Zvinhu zvandakadzidza muBhaibheri zvakatanga kuchinja upenyu hwangu. Ndakagera bvudzi, ndikarega kuita zvese zveunzenza, ndikabva ndaregawo kushandisa madhiragi nedoro. (1 VaKorinde 6:9, 10; 11:14) Ndaida kufadza Jehovha. Saka pandaidzidza kuti aivenga chimwe chinhu chandaiita, ndaisatsvaga chikonzero chekuda kuramba ndichizviita. Asi kakawanda zvaiita kuti ndirwadziwe mumwoyo. ‘Handingarambi ndichiita izvi,’ ndaizviudza kudaro. Uye ndaibva ndatotanga kuita zvandinenge ndafunga izvozvo. Izvi zvakaita kuti nditange kuona kubatsira kwazvinoita kuita zvinhu nenzira yaJehovha. Musi wa29 July 1989, papera mwedzi 6 kubva pandakatanga kudzidza Bhaibheri, ndakabhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha.
Bhaibheri rakandibatsira kuti ndichinje unhu hwangu. Ndaiwanzorwisana nemunhu wese anenge andibata zvisina kunaka. Asi iye zvino ndiri kushanda nesimba pakuva “nerugare nevanhu vese.” (VaRoma 12:18) Handina kuzviita nesimba rangu, asi Jehovha akandibatsira achishandisa simba reShoko rake uye mweya wake mutsvene.—VaGaratiya 5:22, 23; VaHebheru 4:12.
Pane kuva muranda wemadhiragi, kurwa, uye unzenza, ndava kuedza kufadza Jehovha Mwari uye kumuitira zvakanakisisa. Izvi zvinosanganisira kubatsira vamwe kuti vasvike pakumuziva. Pashure pemakore akati kuti ndabhabhatidzwa, ndakatamira kune imwe nyika kuti ndinobatsira kuparidza munzvimbo dzaidiwa vanhu vanoparidza Shoko. Ndiri kunakidzwa nekudzidzisa vanhu vakawanda uye kuona upenyu hwavo huchichinjwawo neBhaibheri. Ndinofarawo kuti amai vangu vavawo Chapupu chaJehovha, zvichibva pakuonawo kuchinja kwandakaita muupenyu.
Muna 1999, ndiri kuEl Salvador, ndakagirajuweta pachikoro chava kuzivikanwa seChikoro Chevazivisi veUmambo. Chikoro ichocho chakandidzidzisa kushanda nesimba pabasa rekuparidza uye kudzidzisa nekufudza muungano. Mugore iroro, ndakaroora mudzimai wangu, Eugenia. Tiri kushanda pamwe chete pakuita basa rekuparidza nguva dzese muGuatemala.
Panzvimbo pekuvhiringidzika neupenyu, ndava kunyatsofara. Kushandisa zvinodzidziswa neBhaibheri kwakandibatsira kuti ndisava muranda weunzenza uye wekuda kurwisana nevamwe uye kwaita kuti ndive neupenyu hwakazara nerudo uye rugare.
^ ndima 9 Zvapupu zvaJehovha zvava kunyanya kushandisa bhuku rinonzi Rarama Nekusingaperi Uchifara!
Vamwe vanhu vakabatsirwa kuti vasiye zvekuitira vamwe utsinye. Zvinhu zvakavabatsira zvinogona kubatsirawo vamwe.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Handichafariri Zvekurwa”
ijwcl chits. 10